Waa Murugo Xaqiiq Ah: Isaga Iyo Carruurtiisii Ayuu Midba Wadan Ku Go’doonsan Yahay- Xidig Chelsea Ka Tirsan Oo Walaac Murugo Leh Muujiyay. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waa Murugo Xaqiiq Ah: Isaga Iyo Carruurtiisii Ayuu Midba Wadan Ku Go’doonsan Yahay- Xidig Chelsea Ka Tirsan Oo Walaac Murugo Leh Muujiyay.
March 25, 2020 at 17:33 Waa Murugo Xaqiiq Ah: Isaga Iyo Carruurtiisii Ayuu Midba Wadan Ku Go’doonsan Yahay- Xidig Chelsea Ka Tirsan Oo Walaac Murugo Leh Muujiyay.2020-03-25T17:33:56+01:00 CAYAARAHA
Xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Spain ee Pedro Rodriguez ayaa walaac xoogan ka muujiyay sida isaga iyo carruurtiisa uu midkooba wadan gaar ah ugu go’doonsan yahay sababta cudurka dilaaga ah ee coronavirus.
Pedro Rodriguez ayaan gabi ahaanba ka bixi karin dalka England oo uu kooxda Chelsea ugu soo ciyaarayay sanadihii ugu danbeeyay laakiin qoyskiisa oo ay ku jiraan carruurtiisu waxay joogaan dalka Spain oo isna dhibaato wayn kala kulmaya coronavirus.
Dhimashada caabuqa Coronavirus ee dalka Spain ayaa sare u dhaaftay tiradii dadkii ku dhintay dalka uu cudurkani ka soo bilawday ee China, wuxuuna dalka Spain noqday mid si wayn dhibaato ugala kulmay faafitaanka COVID-19.
Laakiin Pedro Rodriguez ayaa sheegay in aanu kali ku ahayn dhibaatada go’doonka isaga iyo carruurtiisa wuxuuna tilmaamay in ay tahay arin aad u adag oo ay dad badani kala mid yihiin.
Pedro oo waraysi siiyay idaacada Cadena SER gaar ahaan barnaamijka El Larguero radio ayaa muujiyay in uu ku jiro xaalad walaac leh balse uu halkaas amar guriga in ayna ka bixin ah uu carruurtiisa iyo qoyskiisa siiyay.
Pedro Rodriguez oo dareenkiisa in isaga iyo carruurtiisii uu midba meel ku go’doonsan yahay ka hadlaya ayaa yidhi: “Waa wax adag in aanan iyaga arag. Qiyaas waxaa jiri doona dad badan oo sidayda oo kale ah”.
Pedro Rodriguez oo ka hadlaya dardaaranka uu carruurtiisa siiyay ayaa yidhi: “Waxaan iyaga u sheegay in ay guriga joogaan, waanan u xiisayaa iyaga. Dabcan waxaan jeclaan lahaa in aan iyaga la joogo, waxaan rajaynayaa in ay xaaladu caadi ku soo noqon karto oo aan warka fiican heli karno”.
Intaas kadib Pedro Rodriguez ayaa murugo ka muujiyay xaalada uu dalkiisa Spain kala kulmayo caabuqa coronavirus wuxuuna yidhi: “Warka aan ka helayno Spain, wax walba oo socdaa waa murugo xaqiiq ah. Xaaladu faraha ayay ka baxday, ma jiro dariiq, khayraad ma jiro”.
Ugu danbayn Pedro Rodriguez ayaa u mahad celiyay shaqaalaha caafimaadka dalkiisa Spain ee shaqada waalida ah ku jira wuxuuna yidhi: “Waxaan jecelahay in aan markale u mahad celiyyo shaqaalaha caafimaadka, xoogaga amaanka iyo kuwa ka shaqaynaya supermarket-yada, shaqo fiican ayay hayaan”.
Xaalada Spain ayaa noqotay mid heer kale oo waali ah ku socota iyada oo markii horeba la ogaa jaho wareerka uu coronavirus ka abuuray dalka Talyaaniga waxayna wararku xaqiijiyeen in dadka ku dhintay Spain ay hadda sare u dhaafeen kuwa China kaga dhintay xanuunkan.
« Ma Sidan Oo Dhan Ayay Ugu Waalan Yihiin- Liiska Shanta Ciyaartoy Ee Ay Barcelona Doonayso In Ay Inter Milan Kaga Hesho Saxiixa Lautaro Martinez Oo Faah Faahin Laga Helay.
Dalka Jabuuti oo maanta laga xaqiijyay kiisas badan oo Coronavirus ah »